musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Vanotamba Nhabvu Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara YeBhora Nyeredzi ine zita rekuti "Brunelleschi". Yedu yeFederico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Rise of Federico Bernardeschi. Image Chikwereti: ThePlayersTribune, Wallpapercave uye Gianlucadimarzio
Kuongorora kwakazara kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, dzidzo / basa rake rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, nzira kune mukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwega, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe weinonakidza uye ine tarenda tarisiro inozivikanwa yake yepedyo-yakakwana positi pfungwa uye ziso rechinangwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Federico Bernardeschi's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Federico Bernardeschi akaberekwa pazuva re16th raFebruary 1994 kuna amai vake vanova Mukoti uye baba, Alberto Bernardeschi (anoshanda marble fekitori) muCarrara, nzvimbo yeTuscany, Italy. Pazasi pane yakanaka yegungwa mufananidzo wechidiki Federico Bernardeschi semwana.
Mufananidzo usingawanzoonekwe waFederico Bernardeschi achiri mwana. Image Chikwereti: ThePlayersTribune
Federico Bernardeschi ane mhuri yake kubva kuCarrara, guta riri pakati peItaly rinozivikanwa nekwavo zita rechinzvimbo rakakurumbira; 'Guta remarble'. Zvino mubvunzo:… Nei Guta reMarble? Imhaka yekuti Carrara inozivikanwa nekuda kwemakara ayo machena machena Carrara marble. Waizviziva here? Guta reMarble sezvinoonekwa pazasi inzvimbo yekuzvarwa uye Imba yeItarian Legendary chinangwa Gianluigi Buffon.
Mufananidzo wakanaka waCarrara (Guta reMarble) uko Federico Bernardeschi ane Mhuri yake Inobva. Guta reMarble. Image Chikwereti: carraramarbletour uye Pinterest uye Kuchena.
Mumwe wevabereki vaFederico Bernardeschi- baba vake akashanda kambani yemarble mudhorobha panguva yehujaya hwake. Sezvakangoita vana vazhinji vane vabereki vakabatikana (s), Federico aingoona baba vake manheru ega ega Alberto Aizoshanda maawa marefu, kumuka pamubhedha na5 am, achibva kumba pamberi pe6 am uye odzoka kumba ku6 pm Saka, Federico akapedza hwakawanda hwehupenyu hwake hwepakutanga achiri mudiki naamai vake uye munun'una wake, Gaia.
Kusangana kweKutanga neBhora reSky: Federico Bernardeschi paakange ave nemakore matatu okukura, baba vake vakaenda naye kuchitoro ichi chikuru chemutengesi muCarrara guta. Sezvo mudiki Federico paakatora matanho maviri mukati mechitoro, chekutanga chinhu chaakawona chaive bhora. Pakarepo, akamhanya akananga kwairi, akanhonga ndokuudza baba vake kuti inguva yavanobva. Alberto aida kuti Federico atarise kune mamwe matoyi, asi akaramba achiomerera kuti aida chete bhora renhabvu.
"Nekuti ndaona zvandaida" bhora ", hapana chandakatendera. Ndiwo hunhu hwangu Kana kuti ndinofanira kutaura, ndiwo hunhu hwevanhu vanobva kumhuri yangu yemhuri. Vanhu vanobva kuCarrara vakaoma semarble - Kuti uwane rumwe ruzivo, bvunza Gigi Buffon. "
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Pakutanga muhupenyu hwake, Federico akaita sarudzo yekupedzisira yekuda kuve nyanzvi yebhola. Pakutanga, pakanga paine zvipingaidzo mukutsvaga kwake kuti awane dzidzo yepamusoro yebhola. Munzvimbo maigara Federico, muGuta reMarble, makanga musina kukwana vechidiki vechidiki vekutenderera. Kare ikako, timu yakanakisa munharaunda yake, ASD Sporting Atletico Carrara haana kupa izvo zvaida vabereki vake mushure mekugara navo kwenguva pfupi.
Kuti uwane zvakanakira mwanakomana wavo, vabereki vaFederico Bernardeschi vaifanira kusarudza. Ivo vaviri baba vake nababa vakabvumirana kuti mwanakomana wavo abva kuchikoro kutanga 3: 15 pm (45 maminitsi pamberi pemakirasi echikoro kazhinji akapera) kuitira kuti uende kunotamba nhabvu neyechikoro chitsva.
Federico Bernardeschi Pakutanga Hupenyu Hupenyu naAtletico Carrara. Chikwereti: IG
Pazera ramakore masere, Federico Bernardeschi akatanga kugamuchira dzidzo yake yebhola ne Polisportiva Ponzano, nzvimbo yekudzidziswa bhora yakabatana neEpoli, anenge 70 mamaira kure nemhuri yake kumba. Kare ikako, amai vake vaimutora kubva kuchikoro mazuva ese nguva yekuvhara isati yasvika, vamuita kuti adye masikati (kazhinji pasitauye wozomutyaira wakananga kuEpoli nerudzi rwegrey Opel Vectra. Kutaura nezve chiitiko chezuva nezuva se ThePlayersTribune anoisa, Federico Bernardeschi akamboti;
“Nekuti ndinoziva ini kazhinji ndinononoka. Ndichasunga bhutsu dzangu mumota. Mai vangu vangatadza kumira. Kana ndasvika, ini ndinobva ndabuda kuenda kugomba kuti ndisvike pakudzidziswa kwangu. Maawa maviri gare gare, kudzidziswa kwebhola kwaizopera, uye taizodzoka nenzira yatakauya nayo. ”
Kunyangwe paakasvika kumba kubva kubatikana chikoro uye mutambo wezvemutambo, vabereki vaFederico Bernardeschi nedzimwe nhengo dzemhuri vaiziva kuti akagadzirirwa zvinhu zvikuru sezvo ivo vaizoramba vakamutarisa vachiongorora hunyanzvi hwaakadzidza.
Waizviziva here? Federico aisazove pamubhedha kusvika 10: 30 pm kana 11 pm manheru ega ega, obva amuka mangwanani-ngwanani kuzviita zvese zvakare. Kutsunga kwakadaro uye kushanda nesimba zvakazobhadhara migove yayo. Federico Bernardeschi paakashevedzwa kuti aende kunoedzwa pamwe naFlorentina, kudada kwenhengo dzese dzemhuri (ndakagara naye mukati meyese nhanho rerwendo) yakanga isina miganhu.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Muedzo wakabudirira wakaona Federico Bernerdeschi mugore 2003 (pazera re9) kupinda muchikoro chepapiro cheFiorentina. Florence, iro guta ririko kirabhu iri raingova zvishoma kumabvazuva kweEpoli, mumugwagwa mumwechete Federico naamai vake vaityaira.
Pakutanga pabasa rake, baba vaFederico Bernerdeschi vaigara vachindimanikidza kuti ndiite zvirinani, ndichimutsamwira iye pamukana wese wakarasika. Mukuda kwekumanikidza kudzvinyirirwa kwakagadzirwa nababa vake, Federico akamboti;
"Paunenge uchiri mudiki, dzimwe nguva unombonzwa senge zvakanyanya kunyanya kana zvichibva kuna baba vanokutsamwira chero nguva iwe yausingakwanise zvaunogona."
Asi sezvandaikura zvishoma, ndakatanga kunzwisisa baba vangu vaida zvimwe kubva kwandiri nekuti iye vakatenda mandiri ”
Dzvinyiriro yakaunzwa nababa vake yakatungamira Federico mudiki mukuita fungidziro huru nekirabhu paakakwira kumusoro nevechidiki, achikurira chero vapikisi vanouya nenzira yake.
Federico Bernardeschi Makore Ekutanga neFiorentina. Mufananidzo Wekodhi: IG
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Pazera re16, Federico Bernardeschi uyo aive achitamba nhabvu yepamusoro yehupenyu hwake aive achivhara zvakanyanya mukuita kuti timu yepamusoro iratidzike naFiorentina. Sekufunga kwaaifunga kuti zvese muhupenyu hwake zvaiitika mushe, zvakashata zvakaitika.
Nhau Dzinosuruvarisa: Izvo zvese zvakatanga zuva rakashata Federico akaenda kunoongororwa muviri. Boka rekurapa reFlorentina rakawana chimwe chinhu, chavaiti chaiitika chisina kunaka mumuviri wake chichivaita kuti vaedzezve kuongorora uye Xrays. Mazuva mashoma gare gare, chiremba akapfupisa vabereki vaFederico Bernardeschi izvo zvavakaona mumuviri wemwanakomana wavo.
“Mwanakomana wako ane mwoyo wakakura. Hatina chokwadi kuti zvakashata sei iwe. Zvisinei, zvinogoneka kuti haakwanisi kuenderera mberi nhabvu yake. ”
Chiremba akaudza vabereki vake. Sezvaitarisirwa, Federico haana kuzvitenda, kutaura chokwadi, akaramba kuzvinzwa, achipopota .. "Kwete ... hazvibviri ”. Zvakatora nguva yakareba kuti amai vaFederico vachengetedze mutambi wenhabvu akadzikama.
Federico Bernardeschi akaonekwa aine Cardiomegaly zvinoreva kuti Anowedzera Mwoyo. Mufananidzo Chikwereti: WebMD
Mushure mekutarisisa mamiriro ezvinhu padyo, vanachiremba vakapedzisira vagadzirisa kuti Federico haazokwanisi kutamba nhabvu kwemwedzi mitanhatu chete, chidimbu chemashoko chakaita kuti mhuri yeBernardeschi inzwe kusununguka. Munguva yekumirira, akaedza kuzvichengetedza mune izvo zvaakataura seakanyanya kuomesesa mwedzi yehupenyu hwake. Mushure mekusingaverengeki-kutarisa, kushanya nyanzvi nemisangano, Federico akazogadziriswa kuti atambe nhabvu yake.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Pa 20 June 2014, Federico akapinda munzira yake muchikwata chekutanga achitungamirirwa naVincenzo Montella. Mumakore asingasviki matatu mushure mekuita kwake nyanzvi, (wezera 22), Federico mudiki akapiwa kaputeni armband nekutenda kwake kukura, kuoma-kushanda, yakanaka posential pfungwa uye ziso chinangwa. Kuve iye mutungamiri panguva yehudiki ye22 yaionekwa senge mudiki munhau yeItaly nhabvu uko ruzivo runobatwa zvakanyanya.
Mwaka unotevera (2015-16), Bernardeschi aiva kupihwa nhamba 10 shati yaimbove yakapfekwa neiyo saRoberto Baggio. Panguva imwecheteyo, iye zvakare akawana zita rake rekuti zita "Brunelleschi", mushure mevakakurumbira muvaki. nekuda kwemaitiro ake uye kusimudzira padanda.
Bernardeschi akabata gumi jersey- Iyo inomiririra timu nhamba dzakambohwina naRoberto Baggio. Mufananidzo Wemakadhi: dema
Somutungamiri werudo munyowani, Federico Bernardeschi akapiwa iyo AIAC Nhabvu Mutungamiriri Under-21 Award. Kubudirira hakuna kungogumira ipapo, akave iye wega wemuItaly mumutsara weEFA European Under-21 Championship Chikwata cheBudiriro. Iri feat rakabata maziso emamwe emakirabhu epamusoro eEurope.
Iva mumwe weanonyanya kupisa zvinhu mudiki muItaly nhabvu yakakwezva Fiorentina, Sezvo panguva yekunyora, Federico Bernardeschi akabatsira timu yake kuhwina zvinenge zvese muItaly ligi nhabvu izvo; Serie A, Coppa Italia uye anozivikanwa Supercoppa Italiana.
Rise uye Rise yeFederico Bernardeschi. Image Chikwereti: Pinterest, Chitsana,
Pane imwe nguva, mwana akaramba kusarudza mamwe matoyi kutamba kunze kwebhola ane izvozvi akatsungirira kusimuka kwemamiriro ekunze kusvika mukurumbira pamberi pemeso edu chaiwo. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Kuseri kwemurume wese akabudirira, pane mukadzi akashamisika achidhonza maziso. Munyaya iyi yeAzzurri yenyika dzese, pakanga paine WG inobwinya iyo yakazoita musikana. Iye haasi mumwe kunze munhu akanaka we Veronica Ciardi.
Sangana naFederico Bernardeschi Musikana-Veronica Ciardi. Mufananidzo Chikwereti: DropNews
Kusvika pakuziva Veronica Ciardi: Akazvarwa kuvabereki veItaly, Veronica akazova mumwe wevanofarira kukwikwidza pa2009 yeItaly vhezheni yeBig Brother. Munguva yake panguva yemutambo wekuratidzira, akatanga hukama nemumwe mukwikwidzi anonzi Sarah Nile. Ukama uhu ndihwo hwakakonzera nyadzi kuterevhizheni yeItaly nekuti ndiyo yaive yekutanga musikana kumusikana nyaya yerudo kuti ive inoratidzwa pachiratidziro chechokwadi cheItaly.
Federico Bernardeschi Musikana-Veronica Ciardi nemudiwa wake Sarah Nile. Image Chikwereti: pinkmonster
Ukama hwaVeronica naSara hwakapera munaGunyana 2010 mushure mekudzvinyirira kwakawanda kubva kumuchina weItaly. Federico Bernardeschi uyo ane makore mapfumbamwe mudiki kuna Veronica akatanga kufambidzana naye makore mashoma apfuura mushure mekunge vaive nerudo pakutanga kuona musangano kuFortera.
Mushure memakore maviri anoshamisa ekufambidzana, Bernardeschi uyo asina kutarisa iye Big Brother zvikanganiso akasarudza kukumbira kumusikana wake zvakataurwa neChinese mutepfenyuro, zvakaitika munzvimbo yekudanana.
Bernardeschi akakurudzira kumusikana wake mushure memakore maviri ekufambidzana. Mufananidzo Chikwereti: forzaitalianfootball
Nehurombo, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kune vaviri vacho sezvavanenge vazivisa Amicable kupatsanuka kutanga 2017. Achitaura nezvehukama hwake hwehukama nemusikana wake, Bernardeschi akati zvakamuita kuti akure somunhu. Mushure memwedzi mishanu yekusarongeka kwavo kusarudzika, musikana waFederico, musikana wepamberi akazivisa zviri pamutemo kuparadzaniswa kwake kuburikidza ne Instagram.
Makore mashoma mushure mekupatsanurana, vaviri vevadikani vekudanana dambudziko rakapera sezvo vakadzoka kuzodanana, vachichengetedza hukama hwavo chakavanzika kwemwedzi. Pa 28th yaAugust 2019, Veronica uye Federico vakava vabereki.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwaFederico Bernardeschi kuchaita kukubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani pamararamiro ake hupenyu kubva padanho.
Nekuti pakange paine machena mazhinji-makara makara-chena pakukomba paari achikura, Federico akati mabharani aya dzimwe nguva aizo rova ​​mumaroto ake achigadzira chifananidzo mumusoro wake paanosimuka pamubhedha. Ichi chiitiko chisinganzwisisike chakatanga aine makore matanhatu.
Kusvika pakuziva Federico Bernardeschi Hupenyu hwega kubva padanho. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Kufanana neimbwa yake: Vatambi venhabvu vane mukurumbira C Ronaldo, Neymar, Sanchez etc. ndivo vanoda imbwa chaidzo. Kunyangwe iwe uriko kutaura kwekuti hakuna kuvimbika kwakasara mumutambo wanhasi, zvirokwazvo hazvifunge nezvehukama hwakagovaniswa pakati Federico nembwa yake hombe.
Federico Bernardeschi ndiye mumwe wevadi venhabvu vakanyanya imbwa. Chikwereti ku Instagram
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Nyaya yemhuri yaBernardeshi yakatsanangurwa pakutanga, inodzidzisa vateveri venhabvu vachinetseka, asi vachishuva kuwana hukuru kuti vatende kuti 'nzira yakanakisa yekunzwa isisina tariro ndeyekusimuka kubva kunzvimbo yavo yekunyaradza uye ita chimwe chinhu chakasiyana'. Panzvimbo pekutevera baba vake mukati Marble machry mashandiro, Federico nhasi akaita mhuri yake yose kudada na kugadzira yake yemhuri yake yapfuura kusvika kune rusununguko rwemari, nekuda kwebhola. Iye zvino, ngatipei imwe nzwisiso munhengo dzemhuri yake.
About Baba vaFederico Bernardeschi: Sezvakangoita vabereki vazhinji mu 'Carrara'iro guta reMarble, Federico baba Alberto vakashanda muCarrara Marble wedry femu kwemakore. Ndiye aive baba vevaye vakashanda kwemaawa akawanda, vachimuka pa5 am, vachisiya basa ne6 am uye vodzoka kumba ne6 pm Iye aizotora dzimwe nzira dzekutakura achisiya grey Opel Vectra yake yemukadzi nemwanakomana wake ( Federico) kushandisa mukuvhara pakati pemba, chipatara, chikoro nenzvimbo yekudzidzisa bhora.
Alberto anozivikanwa kuti anoita kuti mwanakomana wake ave negwaro rake rekutanga rine mafambiro izvo zvakatanga kubva paakamutora kuenda naye kuchitoro chetoyi kwaakanhonga bhora rake rekutanga bhora. Zvakare, kumumanikidza kuti aite zvirinani munguva dzekutanga dzebasa zvabhadhara.
Nezve amai vaFederico Bernardeschi: Iwe iye zita haazivikanwe sepakutanga kunyorwa. Nekudaro, vezvenhau vekuItaly vane izvo kuti amai vaFederico vakashanda semukoti kuchipatara asiri kure nemhuri yavo yemhuri. Ainge akaomesa rudo kudaro, asi dzimwe nguva aiburitsa switch kuti aburitse mwanakomana wake. Kuna Federico, pakati pake nababa vake, pakanga paine chiyero chakanaka (The Vatambi Tribune report).
About Federico Bernardeschi's Siblings: Zvinoratidzika kuti haana hama, asi Federico ane hanzvadzi inonzi Gaia Bernardeschi. Gaia inozivikanwa kupa rubatsiro rwemumoyo kune hama yake kunyange iwe zvinoreva kuisa hunhu hwake kuongorora.
Sangana naFederico Bernardeschi'sista- Gaia Berna. Image Chikwereti: Facebook
Akabata pfungwa dzevateveri paakapa gakava pamusoro pehama yake mushure mekupfimba achipokana neboka rake rekare Fiorentina. Federico Bernardeschi hanzvadzi yake akamboti;
“Mudiwa hama, iwe vakakwanisa kushandura maBoos eFiorentina mafani kuita mimhanzi. Wakatamba nebhora patsoka dzako wobva wanyaradza nhandare kumusoro, ... Iwe uri hama hombe !!!. Vanodiwa vaFiorentina mafeni, ndinokunzwira tsitsi, asi semazuva ese, hama yangu yakaratidza mhando yemurume uye mutambi waari. Iye zvino munhu wese akanyarara uye tiri kunakidzwa chaizvo izvi ”.
Aya mazwi aFederico Bernardeschi hanzvadzi yaGiana aive Pa9 Kukadzi 2018, mushure mekunge mukoma wake agamuchira kutuka kubva kuvatsigiri vepamba mumutambo wese waakarova kurova kwemahara muhafu yepiri kunyaradza chaunga.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Hupenyu hwepamusoro nhabvu superstars zvinoonekwa nyore nekwavo vega majee, dzimba huru, uye mafaro akareruka. Federico, iwe mushonga wekurarama wakakura wakanakira kutyaira motokari dziri nyore, rwiyo rwunoratidza kurarama avhareji mararamiro.
Bernardeschi mushonga wekuratidzira mararamiro ekunze. Mufananidzo Chikwereti: yakasarudzika-yekuvakisa, autobytel uye Fiorentina IT
Kunyangwe muhupenyu hwake hwepakati, Federico's modernist imba yakashongedzwa mifananidzo yakavezwa yemametatu, girobhu remuchini uye marble chess mutambo wakaiswa, chipo kubva kuna baba vake icho chakabva kumusha kwake kuguta reCarrara.
KwaFederico, hazvisi zvekutamba kwekugara pamba, asi kushandisa zororo munzvimbo dzakanaka dzemakungwa.
Federico Bernardeschi anoshandisa imwe yemari yake pakuva nemahombekombe eGungwa. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Pane imwe nguva Yakatemerwa kutora mwana mutema: Federico Bernardeschi anotenda kuti Nhabvu yakakosha, asi kwaari, chinhu chakakosha zvikuru munyika 'mutsa'. Nekuda kweizvozvo Federico pamwe nemusikana wake- Veronica Ciardi inhume huru dza Save the Children asiri ehurumende. Izvi zvakaona kuvandudzwa muhupenyu hwemusikana akanaka uyo anoita sekunge ari pasi pavo.
Federico Bernardeschi uye Musikana musikana mienzaniso yakachena yevatano chena nerudo rwevana vatema. Chikwereti: Instagram
Tatenda waFederico Bernardeschi anounza ndangariro dzeshamwari yakafa: Kunze kweiyo Ave Maria yekunyengetera tattoo, Federico ane tattoo dhizaini yekare yakafa nhamba yejasi shamwari. Mavhiki mashoma mushure mekuenda kwaAsa Astori, akavezera nhamba yake padivi pemunamato weCatholic.
Federico Bernardeschi anokudza Davide Astori neTatoo yenhamba yake. Image Chikwereti: Kuona uye ThePlayersTribune
Chitendero chaFederico Bernardeschi: Vabereki vake vakamurera muKatorike uye akazvipira kwazvo kuita kwechitendero chechiKristu. Uchapupu hwepfungwa yake yakasimba yekuve wechikatorike inowanikwa muIki Maria tattoo inki pamaoko ake uye mufananidzo wake nepapa pazasi.
Chitendero chaFederico Bernardeschi chakatsanangurwa. Image Chikwereti: Instagram
Kamwe Target yeUnited: Federico, achiri mudiki aive mumwe weavo vane matarenda akafadza Sir Alex Ferguson. Aimbove mukuru weManchester United akambosiyiwa achifadzwa zvekuti akashuvira kumusayina mu2011. Waizviziva here? kufamba kwacho hakugone kupedziswa nekuti baba vaFederico vakamunyengetedza kuti agare pedyo nenyika yokumusha kwake.
Federico Bernardeschi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Video Summary
Tsvaga pazasi yedu YouTube vhidhiyo Summary yeiyo mbiri. Nomutsa Shanyira uye unyore kwatiri Youtube Channel. Zvekare, tinya kunyorera Bell Icon yekuzivisa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Federico Bernardeschi Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: June 17, 2020